Otu esi etinye ma jiri ngxtop na Ubuntu 20.04 - LinuxCapable
Otu esi etinye ma jiri ngxtop na Ubuntu 20.04
July 5, 2021 June 15, 2021 by Jọshụa James
Ntinye nke ngxtop
Otu esi eji ngxtop
Ntuziaka na-esonụ ga-akụziri gị ka ịwụnye na iji ngxtop. Akụrụngwa a bụ ihe efu, oghere mepere emepe, na-agbanwe agbanwe yana ngwa nleba anya maka sava weebụ Nginx. Otu esi arụ ọrụ bụ mmemme ahụ na-atụgharị ndekọ ohere Nginx wee bipụta ozi gbasara ọnụ ọgụgụ arịrịọ, URI na koodu ọkwa n'etiti njirimara kachasị elu. Nke a bụ ọkacha mmasị maka sysadmins ma ọ bụ ndị ọrụ ike chọrọ ngwá ọrụ dị fechaa iji nyochaa arịrịọ sava weebụ Nginx ha.
Ubuntu Server 20.04 ma ọ bụ gawa n'ihu.
Nginx Nwelite ihe nkesa ruo ụbọchị kwụsiri ike ma ọ bụ mainline.
Nweta mgbọrọgwụ ma ọ bụ akaụntụ nwere ikike sudo.
Melite sistemụ ụbọchị.
Python 3 na PIP 3 arụnyere.
Site na arụnyere Python na pip, anyị nwere ike ịga n'ihu ịwụnye ngxtop. Tinye iwu a.
Ozugbo etinyere ya, kwado ụdị ahụ.
Ugbu a, gbaa iwu ngxtop na-enweghị arụmụka ọ bụla ga-egosipụta nchịkọta nke ọnụọgụ arịrịọ, URI rịọrọ, ọnụọgụ arịrịọ site na koodu ọkwa.
Ọzọ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ndepụta njikọ dịpụrụ adịpụ na sava Nginx gị, pịnye ihe ndị a.
Ọ bụrụ na ị ga-achọ ịhụ nzaghachi 4xx ma ọ bụ 5xx yana njikọ HTTP, ị nwere ike itinye iwu a:
Ndị a bụ naanị ihe atụ ụfọdụ. Enwere ike ịchọta ndepụta zuru oke nke njikọta n'okpuru.
Ị mụtala otu esi etinye ngxtop maka sava Nginx gị na Ubuntu, sistemụ arụmọrụ. Mara, nke a bụ maka nlebanya dị mkpa nke dị fechaa, dị ngwa na dị ọcha iji chọọ stats akọwapụtara na ndekọ gị. Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe ga-aga n'ihu site na iji WebUI, a ga-achọ itinye ngwugwu nyocha dị mma.
Otu esi etinye SQLite 3 na SQLite 3 Browser na Ubuntu 20.04
Tọlite ​​​​Nginx FastCGI Cache na Ubuntu 20.04